William Saliba tantara an-tsarimihetsika momba ny tantaram-pianakaviana mbola tsy fantatra
Home FAMPIASANA CLASSIC Michael Owen tantaram-pitiavana momba ny tantaram-piainana tsy hita isa
Ny LB dia manolotra ny tantara feno momba ny ravina sisa tavela izay malaza amin'ny anarana; Ny 'Wonder Man'. Ny tantaran-tantaran'i Michael Owen momba ny tantaram-pahibemaso sy ny zava-misy tsy fantatra momba ny tantaram-piainana dia mitondra ny fitantarana feno momba ireo zava-niseho mahatalanjona hatramin'ny fahazazany hatramin'izao. Ny analysis dia misy ny tantaram-piainany talohan'ny lazany, ny fiainam-pianakaviana, ny fiainam-pifandraisana ary ny zavatra hafa tsy fantatra momba azy momba ny OFF-Pitch.
Eny, fantatry ny rehetra momba ny Fiainana Legendary fa vitsy no mihevitra ny biography of Michael Owen izay mahaliana. Amin'izao fotoana izao, raha tsy misy adieu, dia aoka isika hanomboka.
Michael Owen Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Voalohandohan'ny fiainana
Michael James Owen dia teraka tamin'ny andro 14 tamin'ny 1979 Desambra tany Chester, Royaume-Uni.
Ny sagittariana teraka Owen no zanaka fahefatra amin'ny ray aman-dreniny. Teraka tany amin'i Jeanette Owen (reny) sy Terry Owen (ray) izy. Niaina nandritra ny fahazazany ny fiainany tany Hawarden, Pays de Galles.
Nampidirin'i Owen tamin'ny baolina kitra tamin'ny faha-7 taonany ny rainy izay nahita azy ho mpilalao sarobidy indrindra ao amin'ny fianakaviana. Amin'ny maha-zatovo an'i Everton, Owen dia nanatrika Sekoly fanabeazana fototra tao Hawarden, Flintshire, avaratr'i Pays de Galles. Tamin'ny faha-folo taonany dia nanara-maso ny fandrosoany ny sasany tamin'ireo mpikaroka malaza.
Michael Owen (niakanjo mainty)
Owen no mpilalao malaza indrindra ho an'ny ekipa Under-11 an'ny Deeside Area Primary.
Fotoana nanapahan'i Yan Rush ny rakitsoratry ny taona 20 ho an'ny ekipa iray ihany tamin'ny fanatsarana ny tanjona 97 teboka iray tamin'ny vanim-potoana tokana, nanatsara ny rakitsarin'i Rush tamin'ny tanjona 25. Nomem-boninahitra izy noho ny zava-bitany.
Tamin'ny taona 12, rehefa nanomboka nanatrika sekoly ambaratonga faharoa i Owen. Fotoana nahalasa azy hanao sonia fifanarahana amin'ny klioba iray izy. Tamin'ity indray mitoraka ity, nanao ny fihetsika ireo mpilalao baolina kitra Ny klioba lehibe voalohany natao hahitàna azy nilalao ho an'ny Deeside dia Liverpool.
Raha ny marina, i Steve Heighway, ilay manam-pahaizana momba ny fampandrosoana tanora Liverpool izay nanoratra tamin'i Owen manokana. Ny fitantanana ny klioba dia tsy mbola nanatona ankizy iray tamin'ity fitiavana ity.
Hoy i Terry Owen, rainy: "[Heighway] nanoratra taratasy manapotipotika anay ary fitiavan-dRtoa Michael. Ny taratasy mahatalanjona ao Liverpool dia naneho ny fitiavan'izy ireo an'i Owen tamin'iny andro iny. "
Na izany aza, taloha Nomen'i Owen azy ny soniany, tsy maintsy namita ny fanadinadinany GCSE izy ary nivoaka ny ambony indrindra amin'ny kilasiny. Na dia eo aza ny fahombiazan'ny fianarana, Owen dia nihevitra fa ny hoaviny dia asa matihanina amin'ny lalao baolina kitra miaraka amin'i Liverpool.
Michael Owen Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Relationship Life
Owen dia niresaka tamin'i Louise Bonsall tao amin'ny Sekoly Rector Drew Primary, tany Hawarden, Clwyd, avaratr'i Pays de Galles. Io dia tamin'ny taona 1984 fony Owen dia 5 taona. Lasa mpinamana izy roa lahy ary lasa zafikelin'ny tanora ary tia olon-dehibe.
Louise Bonsall dia antsoina matetika hoe WAG izay te ho an'ny soavaly amin'ny poketra iray. Mpitaingin-tsoavaly matihanina izy. Tamin'izany fotoana izany, raha mbola tanora mpilalao baolina kitra malaza i Michael, dia nanintona ny sain'ny mpitsoa-ponenana teo amin'ny fisoloan-tena teo amin'ny faha-folo taonany i Louise dia nihotakotaka foana.
Na dia manambady iray amin'ireo mpilalao baolina kitra malaza indrindra eto amin'ny firenena aza ny taona maro lasa izay, dia tsy WAGe stereotypical akory i Louise Owen. Tsy ho hitanao ny fialany amin'ny toeram-pandihizana, na ny fividianana fividianana fivarotana sy fikarakarana kosmetika ho fanatanjahantena fifaninanana.
Ny laharam-pahamehany dia ny fianakaviany aloha ary ny soavaliny dia faharoa. Izy sy ny vadiny dia miaro mafy ny fiainany manokana - raha ny marina dia tsy nanao talohan'izao i Louise.
Nirotsaka tamin'ny 14 February 2004 izy ireo, ary nanambady tamin'ny 24 June 2005, ao amin'ny Carden Park Hotel ao Chester, Cheshire. Nanomana ny hanambady any an-tranony ireo mpivady ireo saingy niova hevitra rehefa nampahafantarina azy ireo fa raha nomena fanomezan-dàlana ho amin'ny lanonana fanambadiana ny toerana dia tsy maintsy anaovana toerana hafa mandritra ny telo taona.
Avy eo dia nisafidy ny hanambady any amin'ny birao fisoratam-bolo amin'ny akanjo tsy ara-dalàna izy ireo ary manana fandraisana an-kafetsena ny ampitson'iny amin'ny toerana misy ny tranony. Ity ambany ity ny fampakaram-bady sary.
Sary fampakaram-bady nataon'i Michael Owen
Nividy mpivarotra Lower Soughton tany Flintshire, any amin'ny faritra avaratr'i Pays de Galles, izy ireo, ary nitazona ny fiarany. Louise Bonsall dia tia soavaly.
Ny zanany vavy, Gemma Rose, dia teraka tamin'ny 1 May 2003. Araka ny efa hitanao teo aloha, i Gemma dia naseho tao amin'ny sary fampakarambady. Owen dia nanokana toko iray manontolo ho an'i Gemma zanany vavy ao amin'ny autobiography, "Michael Owen: Mialà ny rakitsoratra, ny Autobiography".
Tamin'ny 6 February 2006, nanan-janaka lahy antsoina hoe James Michael izy ireo. Ny zanany fahatelo, zanakavavy, Emily May, dia teraka tamin'ny 29 October 2007. I Jessica, zanaka fahefatra, dia teraka tamin'ny 26 February 2010. Ity ambany ity ny sarin'i Owen sy ny fianakaviany mahafinaritra.
Fotoan'ny fianakavian'i Michael Owen
Michael Owen Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Fiainana ao amin'ny fianakaviana
Michael Owen dia avy amin'ny fianakaviana iray salantsalany mahasalama, talohan'ny nandoavam-bola ny fampiasana baolina kitra. Ity ambany ity ny sarin'i Owen ao an-trano miaraka amin'ny fianakaviany (ray, rahavavy kely ary i Andrew rahalahiny zokiny) any avaratr'i Pays de Galles.
Amin'ny ankapobeny dia manana rahalahy sy anabavy roa izy. Ny rahalahiny dia i Andrew Owen, Terry Junior, Karen Owen ary Lesley Partridge. Owen dia noheverina ho zanakalahy be fitiavana indrindra tamin'ny rainy izay mpilalao baolina matihanina teo aloha ary nilalao ho an'ny klioba tahaka an'i Chester City sy Everton (mpanohana an'i Liverpool ny zanany lahy).
Young Michael sy ny rainy
Ity ambany ity ny sarin'i Jeanette Owen izay renim-pianakavian'i Michael Owen.
Jeanette Owen (lavitra eo ankavia)
Owen iray monja no nividy lalana iray manontolo ho an'ny fianakaviany tany Ewloe, izay any amin'ny faritra akaikin'ny toerana nahaterahany.
Ankoatra izany, tao amin'ny 2004, i Karen, anabavin'i Owen, dia nenjehin'ny tanora roa, izay nanandrana naka an-keriny azy. Rehefa nanambara izy fa bevohoka dia nandositra izy ireo. Farany, i Owen no mpiray tam-po amin'i Richie Partridge, mpilalao baolina misotro ronono.
Michael Owen Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Post Post Training Pilot Madrid
Rehefa tafaverina tany UK avy any Real Madrid i Owen mba hilalao an'i Newcastle, dia nandeha tany amin'ny toeram-piofanana BAE teo akaiky izy isan'andro mba handehanana, amin'ny helikoptera, hampiofana miaraka amin'ny kliobany. Izany dia nanambara fa nanan-karena izy.
Ny helikopteran'i Michael Owen dia mitazona toerana fanofanana
Nisy helipada voafetra napetraka teo an-tokotanin'ny tranon'ny Owen sy ny kliobany mba hametrahana ny helikopterany mahafinaritra izay samy mandeha miaraka aminy ary nampiasa azy io koa mba hampiofanana azy ho tonga mpanamory.
Michael Owen, mitaingina ny helikopterany
Nolavina i Owen tamin'ny fiofanana mba ho mpanamory ny fitantanana baolina kitra Newcastle United noho ny fisian'ny fiantohana fiantohana be loatra.
Michael Owen Childhood Story Plus Untold Biography Facts -toetra
Michael Owen dia manana ireto toetra manaraka ireto amin'ny toetrany mahafinaritra.
hery: Tsy misy isalasalana fa tsara tarehy izy, malala-tanana, mahafinaritra ary manana fahatsapana vazivazy.
fahalemena: Afaka mampanantena bebe kokoa mihoatra noho izay azony atao izy, tsy manam-paharetana ary hilaza zavatra na inona na inona tsy mitovy.
Sagittarius dia tia: Owen tia ny Fahalalahana, fandehanana, filozofia ary eny ivelany.
Sagittarius tsy tia: Owen tsy tia olona tsotra, tsy voafehy.
Ambonin'ny zava-drehetra, izy dia afaka manova ny eritreriny amin'ny hetsika henjana ary hanao zavatra mba hanatratrarana ny tanjony.
Michael Owen Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Mpitolona sy ny soavaly
Tamin'ny volana 2013, Owen, niaraka tamin'i Mark Webber, mpamily Formula One teo aloha, dia nividy tsatòka vitsy an'isa ao amin'ny tambajotra sosialy Sportlobster. Owen manana fiara maromaro. Ny fitiavany fiara ara-panatanjahan-tena dia naseho azy taloha Wayne Rooney dia nahafinaritra ny fivoriana nandritra ny taona.
Oiwan koa dia mahafinaritra ny fiarandalamby izay niteraka ny toetrany filokana. Manana hazakazaka maromaro izy, notohanan'i Tom Dascombe. Nentiny ny soavaly Brown Panther izay nandresy tamin'ny hazakazaka lehibe tao Royal Ascot tao amin'ny 2011.
Michael Owen Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Mpitantana Televiziona
Owen koa naneho ny tenany tamin'ny fampisehoana fahitalavitra tamin'ny fahitalavitra Ho an'ny Zero. Ao amin'ny fandaharam-potoana, i Owen dia hivoaka avy ao amin'ny afisy lehibe ao amin'ny efitranon'i Charlie Brice mba hanome toro-hevitra amin'ny fotoanan'ny krizy.
FACT CHECK: Misaotra ny famakiana ny tantaranay Michael Owen momba ny tantaram-pitiavana sy ny zava-misy marina momba ny biographie. amin'ny LifeBogger, dia miezaka izahay mba hahatontosa ny marina sy ny rariny. Raha mahita zavatra izay tsy mijery ity lahatsoratra ity ianao dia mametra ny fanamarihanao na Mifandraisa aminay!.
Bruno Fernandes Fampahalalana momba ny tantaram-pahaterahana an-tsarimihetsika malaza tsy fantatra
Tantara momba ny tantaram-pitiavan'i Daniel James momba ny tantaram-pitiavana tsy hita isa
Divock Origi ny tantaran'ny ankizy momba ny tantaram-pianakaviana tsy hita isa
Ny tantaram-pahaterahan'i Mohamed Salah momba ny tantaram-pianakaviana mbola tsy fantatra momba ny tantaram-piainana
Daty navaozina: 12 jona 2020
Steven Gerrard tantara an-tsary momba ny tantaram-piainana tsy hita isa
Georginio Wijnaldum tantaram-pitiavana momba ny tantaram-piainana tsy hita isa
Ny tantaran'i Ashley Young Childhood Plus untold
Fahatsiarovana momba ny tantaram-piainan'i Memphis Plus momba ny tantaram-piainana tsy hita isa
Ny tantaran'ny tantaran'ny Rio Ferdinand Childhood Plus untold
Zlatan Ibrahimovic Tantara Mitantara Momba Ny Tantaram-pitiavana Zava-bita